This is one of my favourite songs, I hope you will enjoy it!
Oneday, you may suffer from homesick (hay! but, not from your mother's home), this song will become one of your favourite song. ( but, you know, I'm still livin' with my parents.)
The afternoon is heavy on our shoulders.
Ten days on the road are barely gone.
Hay it's good to be back home again
Yeah, 'n, hey it's good to be back home again.
And what's the latest things the neighbors say.
and your mother called last friday: "sunshine" made her cry
Oh, the times that I can lay this tired old body down
and the happiness that living with you brings to me.
Like the fire softly burning and supper's on the stove,
And the light in your eyes that make me warm.
02 BACK HOME AGAIN - < John Denver >
ကျွန်တော်တို့အရှေ့ တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ စည်းကမ်းသိပ်ရှိတယ်လို့ကျော်ကြားတဲ့
မြို့ပြနိုင်ငံ သေးသေးလေးကနေ ပြန်ရောက်စအချိန်ကပါ။ ရန်ကုန်မှာလည်း နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ကော်ဖီဆိုင်တွေ အစီအရီနဲ့ တွေ့ ရတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ J'Donut, Mr. Brown, Ginzar Pan စသည်ဖြင့် ပေါ့ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ တိုးတက်လာပြီပေါ့။ သန့် သန့် ရှင်းရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့Aircon အခန်းထဲမှာ အေးအေးလူလူ ကော်ဖီသောက်ရတာ ပျော်စရာမဟုတ်လားဗျာ။ ဆိုင်ကလေးတွေက အတော်အောင်မြင်ပုံရပါတယ်။ လူမပြတ်လှပါဘူး။ လူငယ်တွေကတော့ အများစုပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲရောက်သွားတော့ ကောင်တာမှာ လူတွေ လေးငါးဆယ်ယောက် ပြုံနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဟိုနိုင်ငံ ပိစိကွေးလေးက ပါလာတဲ့အကျင့်အတိုင်းပဲ နောက်ဆုံးက လူအနောက်မှာ သွားရပ်လိုက်ပါတယ်။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်သာကြာသွားတယ် ကျွန်တော့အလှည့် ရောက်မလာပါဘူး။ ဘယ်ရောက်မလဲဗျာ။ နောက်ရောက်လာတဲ့ လူတိုင်းက ကျွန်တော့ကို ကျော်ကျော် သွားကြတာကိုး။ အဲဒီတော့မှပဲ သဘောပေါက်တယ်။ ကျွန်တော့ ပါရာဒိုင်း နဲ့သူတို့ ပါရာဒိုင်း တူမှမတူပဲကိုး... လို့ ။
ကျွန်တော် နားလည်လက်ခံထားတာကတော့ အရင်ရောက်နှင့်နေသူဟာ အရင် Service ရမယ်လို့ ပဲ။
ဒီ ကော်ဖီဆိုင်လေးရဲ့ပါရာဒိုင်းကတော့ ကြားဖြတ်နိုင်သူကို အရင် Service ပေးမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ အားလုံးပဲ ကြားဖြတ်ကြပါသည်။ ကျွန်တော့ကိုလည်း ဒီလိုဆိုင်မျိုးတွေ တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ တောသားတစ်ယောက်လို ကြည့်ကြပါသည်။ လူငယ်လေးတွေ ပျော်ပျော်ပါးပါး တိုးတိုးခွေ့ ခွေ့ ပဲ ကြားဖြတ်ကြပါသည်။
သူတို့ ကို ကြည့်ရတာ ဒီလို ကြားဖြတ်တာဟာ ရှက်စရာလို့တွေးမိပုံမရပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသားပဲ ကြားဖြတ်ကြ တာပါ။ နောက်မှလာပြီး ရှေ့ ကလူရမယ့် Service ကို လုယူတာဟာ ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မတွေးမိကြတာပါ။ (ဒီလို တွေးတက်အောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ပညာရေးက သင်ကြားမပေးလိုက် ပါဘူး)။ မသိကြတာပါ။ မသိတော့ မရှက်ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်က သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တွေးတက်တဲ့ ကောင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ သော်လည်းပေါ့လေ ...။ “ယနေ့ လူငယ် နောင်ဝယ်လူကြီး” ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ ယနေ့ လူငယ်လေးတွေ ကိုယ်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးထက် ပိုယူတက်တဲ့ အကျင့်ကြီးပါသွားရင် .. နောင်တစ်ခေတ် လူကြီးတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ မဟုတ်လားဗျာ။
ဒီကိစ္စဘယ်သူ့ မှာ တာဝန်ရှိသလဲဆိုတော့ “အားလုံးသိကြပါတယ်ရှင်...” ဆိုသလိုပါပဲ။ အင်း... ဆိုင်တွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတာပဲဗျ။ “ဒီနေရာမှာ တန်းစီပါ” ပေါ့ဗျာ။ ဖဲကြိုးလေး တန်းပေးထားပေါ့။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဟာ ကောင်းတာကို ယူဖို့ဝန်မလေးကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပေါ့ဗျာ... ဆရာလူထုမောင်စိန်ဝင်း ပြောသလိုပါပဲ။ ထန်းလျက်ခဲပဲ စားဘူးတဲ့သူဟာ ချောကလက်ကောင်းမှန်း ဘယ်သိပါ့မလဲ။ မသိတာကို သိအောင်လုပ်ပေးဖို့ တော့ လိုတယ် မဟုတ်လား။
You had but five miunts left to live,
Would you lie within your lover's arm?
Cry out for peace in Vietnum?
Do please tell me
If you had but five minutes left to live,
Mg Pan Hmwe
Trans: Khin Aye Thet
ချစ်သူ့ ရင်ခွင်ကြားမှာပဲနေမလား၊ ဒါမှမဟုတ်...
တရားဘာဝနာပဲ အားထုတ်နေမလား။ ဒါမှမဟုတ်...
ဗီယက်နမ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပဲ ငိုကြွေးနေမလား။
ဆရာမောင်ပန်းမွှေးရဲ့ကဗျာလေးပါ။ ဒီကဗျာလေးရေးချိန်က ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲ ဖြစ်နေချိန်ထင်ပါရဲ့ ။ ဒါကြောင့် ဗီယက်နမ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လို့ရေးခဲ့တာထင်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ရင်း တခြား စာတစ်ပုဒ်က ခေါင်းထဲရောက်လာပါတယ်။ ဘယ်သူရေးသလဲတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ “ဒီကနေ့ ကနေ နောင်အနှစ် ၂၀ ကြာတဲ့အခါမှာ၊ သင်လုပ်ခဲ့တာတွေထက် မလုပ်မိတာတွေကြောင့် နောင်တရနေ ရလိမ့်မယ်” တဲ့။ ဆိုလိုတာကတော့ဗျာ... ငယ်တုန်း ရွယ်တုန်း၊ အခွင့်အရေးတွေ ရနေတုန်းမှာ အရမယူနိုင်ခဲ့၊ မလုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက် နောင်တရနေရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါ။
တစ်ခါက ပန်းပုဆရာတစ်ယောက်ဟာ ခြေထောက်မှာ အတောင်ပံတစ်စုံပါတဲ့ အရုပ်တစ်ရုပ် ထုဆစ်ပြီး အခွင့်အလမ်း Opportunity လို့အမည်ပေးထားပါသတဲ့။ သူက အခွင့်အလမ်းဆိုတာ အတောင်ပံတွေ ပါသတဲ့။ ခင်ဗျားရနိုင်တုန်းမှာ သူတို့ ကို အမိမဖမ်းနိုင်ရင် သူတို့ ဟာ အဝေးကို ပျံပြေးသွားကြမှာပဲတဲ့။
ကျွန်တော်ကတော့ နောက်ဆုံး ငါးမိနစ်ကို နောင်တတွေနဲ့မကုန်ဆုံးချင်ပါဘူး။
Poem, Thoughts | comments (0)
ဆရာတို့ လို အသက်မကြီးသေးဘူး၊
အသက် ၇၀ လောက်အထိလိုက်ရမလားလို့ 
စိတ်ကူးလို့ ကောင်း၊ လှလည်းလှ
သို့ သော်လည်း တကယ်မရှိတဲ့ ကမ္ဘာကို
ခေါ်သွားမှာ စိုးလို့ ဗျာလို့ 
ကိုတာ၊ ဦးဘထုံး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်။
တခါတလေ လယ်ကွင်းစပ်မှာရပ်ရင်း၊ ဒါမှမဟုတ်လည်း ရထားလမ်းဘေး လမ်းလျှောက်ရင်း၊ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ပျံသွားတဲ့ ငန်းတွေ၊ (ဒါမှမဟုတ်လဲ ဗျိုင်းဖြူဖြူတွေပေါ့ဗျာ) ကို ငေးကြည့်ရင်း သူတို့ ဘယ်အထိများ ပျံသန်းသွားကြပါလိမ့်လို့တွေးကြည့်မိပါတယ်။ သူတို့ လို လေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျံသန်းသွားချင်စိတ်လည်း ပေါက်မိပါတယ်။
ပျံနေတဲ့ ငန်းတွေနောက်လိုက်ရင်းပဲ အပြန်လမ်းပျောက်သွားမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် နတ်သမီးတွေ ပျော်စံတဲ့ ရွှေငွေ ရဲတိုက်ကြီးတွေဆီပဲ ရောက်သွားမလား။ ငန်းတွေကတော့ သူတို့ ရဲ့ခရီးဆုံးကို သိပြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ ခင်မောင်တိုး ကတော့ ကြိုးကြာတွေဟာ မြောက်ဘက်ကို သားဖောက်ဖို့ပျံကြသတဲ့။ ကျွန်တော့မှာ တောင်ပံတွေရှိရင် ဘယ်ကို ပျံရမလဲ။ စိတ်ကူးလို့ ကောင်း၊ လှလည်းလှ၊ သို့ သော်လည်း တကယ်မဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာကိုတော့ မရောက်ချင်ဘူးဗျာ။ွ
ကျွန်တော် အခုတစ်လော အင်တာနက်ကို မှန်မှန်သုံးဖြစ်နေတယ်။ မြေနီကုန်းက7Internet ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးပြားပြီလို့လူပြောသူပြော များလွန်းလို့ ကျွန်တော်လည်း ပြားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို အင်တာနက်ရဲ့လက်တံတွေနဲ့လိုက်စမ်းကြည့်တာပါပဲ။
သို့ သော်လည်း အင်တာနက်ငန်းတွေဟာ တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့ ဗျာ ပျံချင်ရာ ပျံကြတာပဲဗျ။ Destination က ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ပေါ့ဗျာ။ စိတ်ကူးလို့ ကောင်း၊ လှလည်းလှတဲ့ virtual ကမ္ဘာကို ခင်ဗျားကို ခေါ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ ၀ဲလယ်နေနိုင်တယ်။ ယစ်မူးနေနိုင်တယ်။ Web ဆိုတဲ့အတိုင်း အဲဒီ ပင့်ကူမျှင်တွေက ခင်ဗျားကို ရုန်းထွက်မရအောင် ရစ်ဖွဲ့ ထားကြလိမ့်မယ်။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ဗျာ၊ Destination တစ်ခုရွေး၊ ပြီးရင် ငန်းလည်ပင်းကို မြဲမြဲသာကိုင်ပြီး လိုက်ပေတော့။ (ငန်းရဲ့ လည်ပင်းဆိုတာ အခွင့်အလမ်း opportunity လို့ဆရာ ကိုတာက ဖွင့်ပါတယ်) ရတက်သမျှ အခွင့်အရေးလေးတွေကို မြဲမြဲကိုင်ပြီး ရည်ရွယ်ရာ အိပ်မက်လမ်းကို လျှောက်ကြပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့ Destination ကတော့ ခပ်ဝါးဝါးပါပဲ။ အခု ဘာရယ်လို့မပိုင်းဖြတ်နိုင်သေးဘူး။ ပျံနေတဲ့ ငန်းတွေနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ (သို့ မဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ အဲဒီလို ထင်နေတယ်)။ နောက်ပြီး လူဆိုတာ အသက်ကြီးလာလေ ပိုပြီး တွေတွေဝေေ၀ ဖြစ်လာတက်သလား မဆိုတက်ဘူး။ သို့ သော်လည်း တကယ်မဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာမှာ သာယာမနေဖို့အသိတရားလေးရှိထားတာ တော်သေးရဲ့ လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သိမ့်ရပါတယ်။